सौन्दर्य | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
घर मा एक मैनीक्योर मैट कसरि गर्ने। सुझावहरू
चमकदार नेल पॉलिश परिचित महसुस गर्दछ। त्यसकारण, फेसनका महिलाहरूको डिजाईन विविधीकरण गर्न पर्याप्त उचित इच्छा छ। मैट मैनीक्योर एक अवधारणा हो जुन हालसालै देखा पर्‍यो। बिस्तारै, न nailsको यस डिजाइनले जित्यो ...
परफ्यूम "भिक्टोरिया सीक्रेट" (भिक्टोरियाको गोप्य): समीक्षा, मूल्यहरू
प्रशंसित अमेरिकी ब्रान्ड भिक्टोरिया सीक्रेट सुन्दर र सुगन्धित टुक्राहरू सिर्जना गर्न समर्पित छ। मूल रूपमा, यस ब्रान्डले "लक्जरी" वर्गको उत्तम अधोवस्त्रको संग्रह, साथै ...
कसरी प्वालहरू संग एक मैनीक्योर बनाउन?
महिलाको हातहरू सधैं स्वच्छ र आकर्षक देखिनुपर्दछ। मैनीक्योर शैली निर्माणको अन्तिम चरण हो। यसले पूर्ण रूपमा विशेष छविलाई पूरक गर्न सक्दछ, वा यो पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त हुन सक्छ। यस लेखमा ...
ट्याटु "शिप": यस चित्रको गोप्य अर्थ के हो?
तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व बिभिन्न तरीकाले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ: कोहीले यसलाई हातले गर्न मनपराउँदछ, मूल र अनन्य चीजहरू सिर्जना गरेर, कसैले शपिंग छनौट गर्दछ र लुगा लगाएर उनीहरूको शैली व्यक्त गर्दछ, र कसैले कहाँ छनौट गर्दछ ...
पुदीनाको र color्ग पहिले नै अर्को सत्रको प्रवृत्तिको रूपमा पहिचान गरिएको छ। विश्वभरका फेसन डिजाइनरहरू सक्रिय रूपमा यस नयाँ नाजुक संग्रहमा यस नाजुक निलो-हल्का हरियो छाया प्रयोग गर्दैछन्। फेसिनिटासको रसदार छाया र न nailsहरू हटाएन, किनकि मैनीक्योर पुदीना हो ...
Alien - Thierry Mugler द्वारा अत्तर। इत्र संरचना, सुगन्ध र ग्राहक समीक्षा
आज हामी थियरी मुगलरको घरका तीन प्रकारका उत्पादनहरूको परीक्षण गर्नेछौं जसलाई एलियन भनिन्छ: परफ्यूम (वा बरु, eau de parfum) "Alien" र उनका दुई कान्छो भाइहरू - "O Extraordinare" र "Sanness"। यो भन्न सकिदैन कि ...
टम फोर्ड (पुरुष र महिलाहरूको इत्र): खरीद र विशेषज्ञहरूको समीक्षा
टम फोर्ड एक प्रसिद्ध, महत्वाकांक्षी र मौलिक व्यक्तित्व हो जसले फिल्म निर्देशन, वास्तुकला र अत्तरको रूपमा मान्यता प्राप्त गरे। यस व्यक्तिले आफ्नै हातले साम्राज्य सिर्जना गरे र "अभेद्य राजा" उपनाम प्राप्त गरे। यद्यपि उनले केवल ...
एलपीजी-उपकरण (मालिश): समीक्षाहरू
छाला बहाली प्रक्रिया वा LPG मालिश लगभग years० वर्ष पहिले प्रयोग भएको थियो। एलपीजी मेशिन एक फ्रान्सेली इन्जिनियर द्वारा विकसित भयो जब उनी दुर्घटनामा परेका थिए र उनले एउटा कोर्स गर्नु पर्ने थियो ...
एक्स्टेन्सनको लागि कसरी चयन गर्ने?
लामो फ्लफि eye बरखाले एकै समयमा एक महिलाको लुक अधिक अभिव्यक्त र रहस्यमय बनाउँदछ। जो प्रकृतिबाट त्यस्तो भाग्यशाली थिएनन् एक्सटेन्सन सेवा प्रयोग गर्न सक्दछन्। धेरै सलुनहरूले यसलाई प्रस्ताव गर्दछ ...
कम्पास - भाग्यको लागि ट्याटू
कम्पास सडकमा अपरेसन योग्य छ। यो कारणले हो कि धेरै उत्सुक यात्रीहरूले आफ्नो शरीरलाई उनको चित्रको साथ रंगीन ट्याटूको साथ सजाउँदछन्। कम्पास एक ट्याटू हो जुन रोमान्टिक भ्रामकहरू द्वारा मात्र होइन, तर ...
रोवन कपाल रye: रंग प्यालेट, समीक्षा
रोवन कपाल रye, प्यालेट जसमा केटीहरु लाई करीव तीस विभिन्न शेड प्रस्तुत गर्दछ, लोकप्रिय छ। यसका थुप्रै कारणहरू छन्। महिला जो "रोवान" प्रयोग गर्छन् ध्यान दिनुहोस् कि यो सस्तो, गन्ध रहित छ, होईन ...
फाउन्डेशन मैक्स फैक्टर स्थायी कार्य। तपाईंको छाला सही छ
यस्तो सम्भावना छैन कि कमसेकम एक महिला युवती छ जो आफ्नो उपस्थितिबाट पूर्ण रूपले सन्तुष्ट छ। केहि गलत हुन बाध्य छ। तर प्राय जसो केटीहरू आफ्नो छालासँग असन्तुष्ट हुन्छन्, जुन अहिलेको वातावरणीय अवस्थालाई हेरेर अचम्म मान्दैन।
Pilki नाखून (एसपीबी): सूचना, ठेगाना, समीक्षा
हालसालै मात्र, यो सम्भव थियो केवल एक मेनीक्योर केवल शीर्ष सैलुनमा र धेरै उच्च मूल्यमा। समयहरू परिवर्तन हुँदैछन्, सेवा बजार बढ्दै छ। जहाँसम्म, नेल उद्योगमा मूल्य र गुणस्तरको अनुपात, सँगै ...
"Faberlik", "डबल एजेन्ट" फाउन्डेसन: समीक्षा। मेकअप रहस्य
फाउंडेशन भनेको महिला कस्मेटिक ब्यागको मुख्य अंश हो, जुन कुनै मेकअप बिना गर्न सक्दैन: दैनिक वा साँझ। यो एक कन्सीलर हो जसले छालामा त्रुटिहरू लुकाउन सक्छ, थकित ...
एक भित्ता के जस्तो गन्ध छ? गल्ती कस्तो देखिन्छ?
यो अत्तरको घटक के हो - भेटीवर? गन्ध कस्तो देखिन्छ? भेटिभर अनाजको परिवारबाट आएका जडिबुटी हो, एक द्रुत-बढ्दो बारहमासी जो 50० बर्ष वा सो भन्दा बढीसम्म बाँच्न सक्छ।
टर्मिकल अनुहार मास्क: खाना पकाउने विधिहरू, व्यञ्जनहरू, समीक्षाहरू
हामी सामान्यतया मसलाको मात्र खानाको लागि थपको रूपमा सोच्दछौं। तर धेरै पूर्वी देशहरूमा उनीहरूलाई बिल्कुलै भिन्न तरीकाले व्यवहार गरिन्छ। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको मूर्ति बनाउँछन् र उनीहरूलाई "देवताहरूको वरदान" ठान्छन्।
कसरी बान्ता बढाउने ताकि त हस्तक्षेप गर्दैन? बंग हेरचाह र स्टाइल
निस्सन्देह, बैंग्स कुनै पनि केशको एक उज्यालो उच्चारण बन्नेछ। कहिलेकाँही तपाईं छवि विविधता ल्याउन चाहानुहुन्छ। तर कसरी धमाके बढ्ने कि कसरी यो हस्तक्षेप गर्दैन, असुविधा पैदा गर्दैन र, अन्तमा, दैनिक उपस्थिति खराब छैन ...
फुटबल खेलाडीहरूको लागि फैशनेबल बालबालिकाहरू
डेभिड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी र अन्य धेरै खेलाडीहरू उनीहरूको प्रथम श्रेणी खेल मात्र होइन, उनीहरूको असामान्य हेयरकटको लागि पनि हामीलाई सम्झन्छन्। एथलेटिक प्रतिभा बाहेक, तिनीहरू स्वादको एक ठूलो भावनाको साथ सम्पन्न छन्। को बारे मा ...
जेलमा जेलमा कति लामो हुन्छ? मैनीक्योर लागत, समीक्षाहरू
एक सुन्दर र दिगो दिमाग मैनिक्योर धेरै केटीहरूको सपना हो। र यो जेल पॉलिशको आगमनसँग वास्तविकता भयो जुन नेल एक्सटेन्सन जेल जत्तिकै दिगो हुन्छ र नेल पॉलिश जस्तो लागू गर्न सजिलो हुन्छ। यो उत्तम छ ...
आँखा र कुखुराको छेउमा के हुन्छ
हेमेटोमास (चोटहरू) सबैभन्दा नाजुक समस्याहरू मध्ये एक हो, विशेष गरी ती केसहरूमा जब तिनीहरू समाजबाट लुक्न सक्दैनन्। हेमेटोमाको देखावाको प्रक्रिया एकदम सरल छ: नरम, विशेष गरी संवेदनशील ऊतकहरूमा क्षति पछि वा ...
49 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,298 प्रश्नहरू।